कार वातानुकूलन खुम्च्याउने: कार्य, उपकरण दोष मरम्मत
प्रणाली को मुख्य तत्व वाहन मा हावा, यसको सञ्चालन सुनिश्चित जो, एक खुम्च्याउने छ। यो बिना, यन्त्रको सञ्चालन पक्षाघात गरिनेछ। प्रस्तुत सदस्यले रेडियेटर मा हावा प्रवाह प्रदान गर्दछ।
एयर-कंडीशनिंग उपकरण छ एकदम सरल र बहुमत जस्तै कार ब्रान्डहरु। यसको मुख्य तत्व freon heats र वातानुकूलन रेडियेटर यसलाई पठाउँछ जो खुम्च्याउने छ। त्यहाँ ग्याँस एक प्रशंसक द्वारा cooled छ र तरल मा परिवर्तित छ। यस ड्रायर सबै खानी उत्पादन विभाजित छ।
कार सहज थियो, यो समय समयमा सबै प्रणाली जाँच गर्न आवश्यक छ। वातानुकूलन यहाँ पनि, समय समयमा, तपाईं दोष पाउन सक्नुहुन्छ किनभने, एउटा अपवाद छैन। को खुम्च्याउने दुवै यांत्रिक र बिजुली क्षति पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। अक्सर समस्या को समापन निहित , विद्युत चुम्बकीय क्लच कारण जो हावा कंडीशनर गर्न इन्जिन ले टोक प्रसारित छैन। यस मामला मा, मात्र होइन शक्ति एकाइ, तर पनि सर्किट लागि युग्मन तार जाँच गरियो। यदि यो घुमावदार छ, यो बदलिएको छ। केही अवस्थामा युग्मन यंत्रवत् जाम गर्न सकिन्छ।
वातानुकूलन खुम्च्याउने कारण एक इनकार गर्न काम गर्न सक्दैन नियन्त्रण वाल्व को। कारण समायोजन प्वाल मा माटो सफा गर्न सक्छ। एकै समयमा यन्त्र हटाउन हुनेछ। वाल्व प्रतिस्थापन वा सफाई यसलाई मदत छैन भने, तपाईं सम्पूर्ण एकाइ प्रतिस्थापन गर्न छ।
प्रत्येक ब्रान्ड यसको आफ्नै विशेषताहरु छ किनभने, वेंटिलेशन उपकरण प्रत्येक कार लागि ध्यान र व्यक्तिगत हुन छ जाँच गर्नुहोस्।
खुम्च्याउने कंडीशनर सवारीसाधान रेडिएटरको गर्न हावा को आपूर्ति सुनिश्चित जो आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न सक्दैन। यस मामला मा, निम्न परीक्षण गरिन्छ: यसको वाष्पीकरण तापमान सामान्य छ कि छैन भनेर पर्याप्त कूलेंट को, रकम उपकरण भण्डारण कि। इलेक्ट्रनिक्स सबै सही छ भने, तपाईँले मेकानिक्स जाँच गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि मामला मा निदान र दूषण सबै तत्व खाली गर्न आवश्यक छ।
त्यस अवस्थामा मा, वातानुकूलन खुम्च्याउने मरम्मत गर्न सक्दैन भने हुन, यसलाई विस्थापन गर्न सजिलो हुनुपर्छ। नयाँ स्पेयर भाग warranted छ भन्ने तथ्यलाई। तपाईंले आपूर्ति गर्न पहिले नै प्रयोग गरिन्छ उपकरण प्रतिस्थापन गर्ने निर्णय भने, कुनै एक त यो लामो पछिल्लो हुनेछ भनेर आश्वस्त गर्न सक्छन्।
त्यो कसरी वातानुकूलन खुम्च्याउने, सेन्सर देखाउन छ। तिनीहरूले पनि दोष रिपोर्ट। धेरै दबाब पनि कम वाष्पीकरण तापमान: यो समाधान गर्न धन्यवाद, विभिन्न शक्ति majeure रोक्छ।
कार को प्रस्तुत तत्व वाहन ब्रान्ड आधारमा विफलता एक प्रकारको हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, वातानुकूलन खुम्च्याउने बीएमडब्ल्यू कारण संधारित्र decayed छ भन्ने तथ्यलाई काम गर्न सक्दैन। यसलाई परिवर्तन गर्न एकदम सरल छ हुनत वातानुकूलन सामान्यतया काम गर्न थाले। यो पनि नलिका भर्नु को विफलता हुन सक्छ। अब तपाईं कार्यहरू सही अनुक्रम चयन गर्न कठिन परिस्थितिसित मदत गर्नेछ केही आधारभूत जानकारी कुरा गर्न सक्नुहुन्छ!
Berlinetta F12 फेरारी: प्राविधिक विनिर्देशों, समीक्षा र परीक्षण ड्राइभमा
बीएमडब्ल्यू: को संक्षिप्त लागि खडा रूपमा?
ड्राइव चित्रकारी पाउडर पेंट्स: समीक्षा। आफ्नै हातले पाउडर कोटिंग डिस्क
Tilapia - व्यञ्जनहरु
"टेरा बैंक": ग्राहक प्रतिक्रिया, समीक्षा। "टेरा बैंक": समस्या
सार्वजनिक व्यवस्था - निजी नियम .... सार्वजनिक व्यवस्था governs
"Tinkoff" बैंक, क्रेडिट कार्ड, बीमा र अन्य सेवाहरू योगदान
कोठामा संगीत। को कोठामा-सहायक संगीत के हो?
रक्तअल्पता - एक रक्त विकार
ठोस बेकहो लोडर JCB 3cx